के हो ब्ल्याक फङगस ? आँखालाई कसरी जोगाउने ? - नयाँ दिशा अनलाईन::नयाँ युगको नयाँ अनलाईन नयाँ दिशा अनलाईननयाँ युगको नयाँ अनलाईन
कोविड -१९ रोग सार्स-कोभ -२, एक आरएनए भाइरस हालसालै विश्वव्यापी महामारीमा परिणत भएको छ। यो सरुवा रोग हो, तिव्र रुपमा सर्ने यसको गुण हुन्छ । विशेष गरी बुढाबुढी, मधुमेह, हृदय रोग, दीर्घकालीन श्वास रोग र प्रतिरक्षा क्षमता कम भयका मनिसमा मुर्तु दर बढी हुने गरेको पाइयको छ। यद्यपि सामान्य लक्षणहरू र लक्षणहरूमा सामान्यतया ज्वरो, खोकि र श्वासप्रश्वासमा कमी हुनु, सामान्य तया आंखा रातो हुनु पनि लक्षणहरू मध्ये एक हो । भाइरस मुख्यतया एक व्यक्ति-देखि अर्को व्यक्तिमा थुकको थोपाहरू मार्फत फैलिन्छ। यदि व्यक्तिले संक्रमित व्यक्तिबाट भएको कुनै वस्तु वा सतहलाई छुन्छ त्यसपछि आफ्नो मुख, नाक वा आँखा छुन्छ भने यो फैलिन सक्छ। क्लिनिकल अनुसन्धानहरूले सुझाव दिएका छन कि भाइरसले आंखामा असर गर्नु का साथै आंखा बाट पनि सर्ने गर्दछ । कोविड -१९ रोग को लागी कुनै निश्चित उपचार छैन, वर्तमान उपचार लक्षणहरुको आधारमा दिइन्छ। अहिले नयाँ देखियको Black fungus ले आंखमा दृस्टी समेत गुमाउन सक्द्छ । त्यसैले यो माहामारी को बेलामा आंखा जोगाउँन जरुरी देखिन्छ। यस महामारी अवधिमा भाइरल ट्रान्समिशनको जोखिम कम गर्न उचित आँखा हेरचाह आवश्यक छ।
मुम्बईस्थित आँखा शल्य चिकित्सक डा अक्षय नायरले बीबीसीलाई बताए कि उनले अप्रिलमा black fungus ४० जना बिरामीहरूको उपचार गरे। ती मध्ये ११ जनालाई आँखा निकालन पर्‍यो। भारतमा black fungus को कुल संख्या स्पष्ट छैन, तर मिडिया रिपोर्टले दर्जनौं देखि सयौं घटनाहरू रेपोर्ट गरी रहेका छ्न । मुम्बईको सियोन अस्पतालको कान, नाक, र घाँटी शाखाका प्रमुख डा. रेणुका ब्रैडूले बीबीसीलाई बताय अनुसार त्यहाँका डाक्टरहरूले विगत दुई महिनामा black fungus का 24 वटा घटना देखेका छन्। सामान्यतया, तिनीहरू एक बर्षमा मात्र करिब ६ वटा केसहरू देखिने गर्दछ । कोविड -१९ महामारीको बेला आँखाको देखभाल कसरि गर्ने? रोग सार्ने जोखिमहरूलाई कम गर्नका लागि, आँखाको राम्रो देखभाल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। आँखा हेरचाहको लागि यी निर्देशनहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। आँखाहरू छुने चिलाउने काम कम गरनु पदर्छ। आँखाको साथसाथै हात, नाक र मुखको रक्षा गर्दा कोरोनाभाइरसको विस्तार कम हुन्छ। फोहोर हातहरू भाइरल संक्रमणको स्रोत हो, त्यसैले साबुन पानी वा सेनिटाइटरहरूमार्फत बारम्बार हात धुनु राम्रो हुन्छ। मास्कहरू नियमित रूपमा लगाउनुपर्दछ, यदि लागू भएमा। खोकी वा ह्यछुउ गर्दा नाक मुख राम्रो सँग छोपिनु पर्दछ ।, चश्मा लगाउने र अन्य सुरक्षात्मक उपकरणहरूले सुरक्षाको तह थप्न सक्दछ। यद्यपि सुधारात्मक चश्मा वा सनग्लासले आँखालाई संक्रमित बाट रोक्नन मद्दत गर्दछ, ती आँखालाई भाइरल एक्स्पोजरबाट पूर्ण रूपमा जोगाउँदैनन्। भाइरस अझै पनि खुला पक्ष, टुप्पो र चश्माको बोटमबाट आँखामा पुग्न सक्छ।
पूर्ण अनुहार सुरक्षाको लागि, सुरक्षा गग्गल वा फेस-शील्ड लगाउनु पर्छ। सुरक्षित कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउने र देखभाल गर्ने यधपी रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) र अमेरिकी Optometric संघ (AOA) का अनुसार चस्मा प्रयोग गर्ने र कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोगकर्ता हरु मध्धे कोरोना को सन्क्रमन बढी हुने कुनै ठोस प्रमाण देखियको छैन। महामारीको बेला आँखा जोगाउन, contact lens लगाउनेहरूले सुरक्षित लेन्स लगाउने अभ्यास गर्नै पर्छ र राम्रो बानीहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ। केवल भाइरल प्रसारण घटाउन मात्र होइन, तर उचित सरसफाइले अन्य सूक्ष्मजीवहरूले गर्दा संक्रामक आँखा रोगहरू पनि रोक्न मद्दत गर्दछ। कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउनु अघि र हटाउनु अघि कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म साबुन र पानीले हात धुनु पर्दछ। हात सफा टिश्यु प्रयोग गरेर सुक्नु पर्छ। यदि लक्षणहरू जस्तै ज्वरो, खोकी देखियको अवस्थामा, कन्ट्याक्ट लेन्स को ठाउँमा चस्मा लगाउँन उचित हुन्छ। लेन्स लगाउँदा प्राय: आँखा छुन्छन्, परिणामस्वरूप रोग सर्ने गोखिम बढ्छ। कोविड -१९ भाइरसको फैलावट रोक्नको लागि हात सफा गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उपयुक्त आँखा सुरक्षात्मक उपकरण छनौट कोविड -१९ भाइरसको प्रसारण मोडहरू मध्ये एक दूषित थोपाहरू मार्फत हो जुन आँखा मार्फत सिधा शरीर भित्र पस्न सक्छ। चश्माले आंशिक रूपमा संक्रमित थोपाबाट आँखालाई रक्षा गर्छ किनकि भाइरस अझै पनि चश्माको खुला ठाउँबाट आँखामा पुग्न सक्छ। पूर्ण सुरक्षा पाउनको लागि, अन्य आँखा र अनुहार सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्दछ । । चश्माहरू र फेस सिल्ड प्राय: प्लास्टिकको विभिन्न ग्रेडबाट बनेका हुन्छन्, अधिकतर पॉली कार्बोनेट बाट बनेका हुन्छन । उचित सुरक्षा उपकरणहरू छनौट गर्दा, सामग्रीको गुणस्तर, सुविधा र पारदर्शितालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
@लेखक बुटवल आंखा उपचार केन्द्र भुट्कीचोकसँग सम्वन्धित छन् ।
यस लेखमा कतिपय स्वास्थयसँग सम्वन्धित अंग्रेजी टरर्मिनोलोजिकल शव्दहरु प्रयोग भएका छन् ।